मका फाइदाहरू - मद्दत MEHemp
अगस्ट 05, 2020
मका पेरू मूल निवासी पेरू हो (वैज्ञानिक नाम: लेपिडियमmeyenii) जुन एन्डिज पर्वतहरूको उच्च पठारमा बढ्छ, मुख्यतया कडा अवस्थाहरूमा ,4,000,००० मीटर उचाइमा। यो कम्तिमा 3000००० बर्ष सम्म तरकारी बालीको रूपमा विकसित भएको छ र खाना पकाउन र औषधिमा प्रयोगको लामो इतिहास छ। यो ब्रोकोली, बन्दकोबी, र मूलीसँग सम्बन्धित छ।
मका पेरुभियन खाना पकाउन मा एक साधारण घटक हो। बोटको मुख्य खाद्य भाग जरा हो, जो सामान्यत: सुक्खा हुन्छ र पाउडरको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यो पाउडरको रूपमा खपत गर्न सकिन्छ र खानामा थप्न वा स्मूदीहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो बेक गरिएको वा भुटेको, सूपको रूपमा तयार गरिएको, र किण्वित पेय बनाउनका लागि प्रयोग गरिन्छ maca chicha.
खाना पकाउनेमा यसको धेरै प्रयोगहरू बाहेक, maca हालसालैका शोध अध्ययनहरूमा पनि ठूलो प्रतिबद्धता देखाएको छ। जबकि अनुसंधान यसको स्वास्थ्य लाभ को बारे मा आफ्नो शैशव मा छ, हामी प्रयोग को पांच स्वास्थ्य लाभहरु मा हेर्नेछौं maca तल बोट
१. कामेच्छा बढाउँदछ
कम यौन चाहना आजका वयस्कहरूको लागि सामान्य समस्या हो। नतिजा स्वरूप, बोटबिरुवा र जडिबुटीहरूमा ठूलो चासो छ जसले कामेच्छालाई बढावा दिन्छ।
को सबै भन्दा राम्रो ज्ञात लाभ maca मूल कामवासना बढाउन यसको क्षमता हो। अध्ययनले सकारात्मक परिणामहरू देखायो जुन macaजरा एक प्लेसबोको तुलनामा कामेच्छा बढ्यो, macaकामेच्छा सुधार, र postmenopausal महिलाहरूमा यौन रोग लाई कम गर्न मद्दत गर्‍यो।
यसैले विज्ञानले दावी गर्न सक्नु भन्दा अगाडि थप अनुसन्धान आवश्यक छ maca कामेच्छा बढ्दछ, प्रारम्भिक रिपोर्टहरू यस सम्बन्धमा धेरै आशाजनक छन्।
२. इरेक्टाइल डिसफंक्शनलाई रोक्छ र पुरुष प्रजनन क्षमता बढाउँछ
मका जरा ईरेक्टाइल डिसफंक्शन (ED) बाट पीडित मानिसहरूलाई मद्दत गर्न सक्छ। अनुसन्धानले देखाएको छ कि थोरै मात्रामा खपत maca तिनीहरूका सामान्य र यौन कल्याणको बारेमा दैनिक सुधारिएको सहभागी धारणा।
साथै, भर्खरको अनुसन्धानले यो देखायो maca जराले दुवै उर्वर र बांझ पुरुषहरूमा वीर्य गुणस्तर बढाउन सक्छ।
मका शुक्राणु उत्पादन बढाउन र शुक्राणुको गुणस्तर सुधार गर्न देखाएको छ। यसैले, maca पुरुष प्रजनन क्षमता बढाउनका लागि आशावादी छ।
Men. रजोनिवृत्ति लक्षणहरु लाई कम गर्दछ
रजोनिवृत्ति भनेको त्यो अवस्था हो जसमा महिलालाई मासिक धर्म स्थायी रूपमा रोकिन्छ। यो एस्ट्रोजेनको गिरावटको साथ हो, जुन विभिन्न अप्रिय लक्षणहरू निम्त्याउन सक्छ।
मका एस्ट्रोजेनको स्तर सन्तुलनमा प्रतिबद्धता देखाएको छ। उल्लेख गरिए अनुसार, एस्ट्रोजेन लेवलमा उतार-चढ़ाव हुन्छ र पेरिमेनोपाज र रजोनिवृत्ति चरणमा महिलाहरूका लागि बिभिन्न लक्षणहरूको कारण दिन्छ। मका एस्ट्रोजेनको अधिक स्थिर स्तर प्रदान गरेर तातो चमक, मुड स्विings्ग, निद्रा समस्याहरू, चिडचिडेपन र रातको पसीना सहित यी प्रभावहरूलाई प्रतिरोध गर्न मद्दत गर्दछ।
Lear. शिक्षण र मेमोरीमा सुधार गर्दै
मका शिक्षा र मेमोरी प्रदर्शन सुधार गर्न मद्दत गर्न सक्छ। वास्तबमा, maca परम्परागत रूपमा पेरूका मूल निवासीले स्कूलमा बच्चाहरूको प्रदर्शन बढाउन प्रयोग गरेको छ। जबकि अध्ययन सीमित छ, प्रमाण सुझाव दिन्छ कि maca यी संज्ञानात्मक कार्यहरू सुधार गरियो। र अनुसन्धानकर्ताहरूले यो सुझाव दिएका छन् macaअल्जाइमर रोग जस्ता अवस्थाहरूमा उपचार गर्न प्रभावकारी हुन सक्छ जुन यी प्रक्रियाहरूसँग सम्बन्धित छ।
Your. तपाईको मुडलाई सुधार्दै
मका flavonoids समावेश गर्दछ, जुन तपाईंको मुड सुधार र चिन्ता कम गर्ने विश्वास गरिन्छ। अनुसन्धान फेला पर्‍यो कि यसको प्रयोग macaचिन्ता र उदासिनता को कम भावनाहरु।
मका मूल पाउडर धेरै पौष्टिक छ र धेरै आवश्यक भिटामिन र खनिजहरूको उत्कृष्ट स्रोत हो। यसले भिटामिन सी, तामा, र फलाम समावेश गर्दछ।
मका मानव उपभोग मार्फत विभिन्न स्वास्थ्य लाभहरू देखाईएको छ। यो विशेष गरी यौन स्वास्थ्य को लागी सही हो। किनभने त्यहाँ प्रायः स्वास्थ्य जोखिमहरू प्रयोग गरेर छैनन् maca, मानिसहरूले प्रयास गर्न सक्दछन् maca कुनै प्रतिकूल साइड इफेक्टको डर बिना।